Kutubta Musdhalaxul Xadiithka | U adeeg Xadiith-ka Rasuulka
Kitaabkan waxuu u qorayn yahay sidii gabay ahaan. Waa 34 beyt. Waxaan kula talin lahaa qof welba oo doonaya inuu hadda bilowdo cilmul xadiith inuu kitaabkan ku bilaabo. Sababtoo ah waa bilow , waana kitaab aad u fudud xag fahan ahaan iyo xag xifdis ahaanba. Kitaabka waxaa qorayمحمد بن فتوح البيقوني . Sheekhan mahan mid aad caan u ah,taariikhdiisa iyo culumadiisana aqoon saas ah looma lahan. Waxaa la ogyahay uun inuu ku noolaa Dimishiq asalkiisana uu ka yimid Adirbijan . sidoo kale Mad-habtiisuna ay tahay Shaaficiya . Culimo badan ayaa sharaxayna sida Dimyaadi, Ibnu Cutheymiin, Cabdikariim ibnu Cabdullah al khudeyr iwm. Sheekhu waxuu noolaa 1080 hj. Ilaahay swt haka ajar siiyo waanaguu ummada usoo dhigay,Miizaankiisa xasanaatkana ha ugu daro aamiin.
Kitaabkan Waa gabay ka kooban 994 beyt. Waxaana qoray Imam Cabdiraxmaan ibn abiibakar, Jalaludiin A-Suyuudi. Waxuu asalkiisu ka soo jeedaa Masar/Egypt. Imaamkan aad ayuu caan u yahay, waxuuna alifay kutub fara weyn, kuwaas oo lagu qiyaasay 600 kutub. Hadaba kitaabkan ama gabaygan waxaan aad ugala talin lahaa dhalinyarada doonaysa inay xifidaan Musdhalaxa inay kan xifidaan , sababtoo ah waa mid aad u fudud una faaido badan. Sheekhu waxuu dhintay 911hj. Kitaabkan waxuu caan ku Yahay sida cinwanka koreba ku qoran “alfiyatu suyuudi” . Imaam weyn ayuu ahaa oo runtii laga faaiday Ilaahay swt ajar iyo xasanaat haka siiyo. Waxaa sharaxay culimo badan, Sida sheekh Axmed Shaakir, Cabdil muxsin Cabbaad, Muxamed Cali Ethiopi iwm .
Kitaabkan Waxuu Caan ku yahay “Muqadimatu Ibnu Salaax”. Waxaa kale oo la yidhaah ” Culuumul Xadiith”. Waxaa qoray Abuu Camr Cuthmaan Ibnu Cabdiraxmaan Ash-Shahrazuuri ee ku magac dheer Ibnu Salaax. Waxuu dhintay 643hj. Kitaabkan waa mid aad faaido u leh. Wax welba ayuu kulansaday oo faaido ah. Culimadii isaga kawada danbeeyayna , waxay ahaayeen uun qaar isaga soo gaabiya, qaar gabay ka dhiga iwm. Waana kitaab daabacan oo aan sidaas u weynayn.
Kitaabkan waxaa alifay oo asalkiisa leh Imaam Muxyidiin Yaxya ibn Sharaf An-Nawawi. Imaamkan oo ahaa reer Dimishiq, dhintayna 676hj. Imaamku Kitaabka waxuu ula baxay “Taqriib wa Taysiir li Macrifati Sunanil Bashiir” . Waxuuna kasoo gaabiyay Kitaabkii Ibnu Salax ee ahaa Culuumul xadiith ama “Muqadimatu Ibnu Salax”. Hadaba waxaa kitaabka sharaxay oo ula baxay magacan aan Cinwaanka oga dhigay Kitaabka ee ah “Tadriibu Raawi,fii sharxi Taqrib Nawawi” Imaam Jalaaludiin Suyuudi. Kitaabka wuu sii waadixiyay faaido badana wuu ku sii dhex sheegay. kitaabkan aad ayuu u macaanyahay , waxaan kugula talin lahaa inuu guriga kuu yaalo oo aad iska akh-akhridid.
Kitaabkan waa iska kitaab suaalo iyo Jawaabo ah oo ku saabsan sidoo kale Cilmul xadiith. Kitaabka waxaa alifay Sheekh Mustafa al Cadawi , sheekhu wuu noolyahay Ilaahay hanoo xifidee waana reer Masar/Egypt. Kitaabka waxyaabaha aan ku jecelahay waxaa kamid ah, Markaad casharka soo dhigato sida bayquuniyada ama kitaab kale uun ee aad rabto inaad suaalo iska weydiiso shakhsiyan ayaad akhrisan waxaadna ka faaidi cilmi aad u weyn runtii. Marka waxaan kugula talin lahaa kitaabkan inuu Shandada kuugu jiro oo aad Muraajaco kaga dhigato cilmul xadiithka.
Kitaabkan Waxaa la dhahaa ” Nadhmu Durar fii Cilmil Athar”. Waxuuse caan ku yahay “Alfiyatul Ciraaqi”. Waa gabay ka kooban 1000 beyt. Waxaa qoray Imaam Zeynu diin Cabdiraxiim Ibnu Xuseen Al Ciraaqi. Imaamku waxuu dhintay 806hj. Kitaabkii Ibnu Salaax ayuu gabay ka dhigay oo waxna uu ku sii siyaadiyay. Kitaabkan shuruux badan ayuu leeyahay , labo kamid ah isla Imaamka ayaaba sharxay. Laakiin waxaa jira Sharax caan ah oo la dhaho “Fatxul Muqhiith” Waxaana sharxay Imaam Sakhaawi.
Kitaabkan waxaa Qoray sheekh Muxamed Daxxaan. Waa iska kitaab yar balse soo koobaya Cilmiga funuuntiisa iyo qawaacidkiisaba. Sidoo kale kitaabka waxyaabaha aan ku jeclahay waxaa kamid ah markuu nooc welba sharaxo ayuu hadana hoostiisa ku qoraa Kutubta laga alifay noocan. Tusaale Waxuu kahadli “Xadiiska Mursalka” kadibna waxuu hoos ku qori kutubta u goonida ah noocan ee Mursalka bas ah ka hadla iwm.
Kitaabka asalkiisu waa “Nukhbatul Fikir” sharaxiisuna waa “Nuzhatu Nadhar” . Waxaa alifay oo sharxayna isla Imaamka leh Kitaabka ee ah Alxaafid Ibnu Xajar al Casqalaani. Imaamku waa reer Masar , waxuuna dhintay 852hj . Kitaabka wuu yaryahay balse aad u faaido badan. Imaamku si qurux badan ayuu u sharaxay una qoray.